सम्पूर्ण नेपाली साहित्यप्रेमीहरुको बिसाउने साझा चौतारी
-रोशन थापा 'नीरव'
घरबाट निस्कनुअघि उसले खल्ती छामेको थियो । खल्तीमा केही थिएन । यो उसलाई थाहा थियो । राखिएको भए पो केही हुन्थ्यो । संयोग कस्तो भने खल्ती खाली भएभै पेट पनि चाँडै नै खाली भएर बज्ने गथ्र्यो । पानी वा पाँच रुपैयाँको चनाले दिन कटाउन त कठिनै हो तर उसले कटाउने गथ्र्यो ।
घरबाट निस्केपछि ऊ सहिदमञ्च पुग्थ्यो । त्यहाँ थरथिरकिा मान्छेहरू भेला हुन्थे । कोही सरकारलाई सराप्थे । कोही आफैंलाई धिक्कार्थे । कोही सडकलाई अवरुद्घ पार्थे । कोही शारीरकि भोगका लागि सडककर्मी युवतीका पछिपछि दौडन्थे । ऊ मौन यी सबै क्रिया हेरेर समय कटाउँथ्यो र साँझ घर र्फकन्थ्यो ।
ऊ एक्कासि यस्तरी बेरोजगार भइदिएको थियो, देख्ता पत्यारै लाग्दैनथ्यो । पढेलेखेको शिक्षित व्यक्ति हो । कतै काम पनि गथ्र्यो । बीचमा के भयो कुन्नि, एकदमले बेकारी बनिदियो । अनि त के, त्यस्तो मान्छे न घरमा उपयुक्त हुन्थ्यो, न राष्ट्रमा, न समाजमा ठीक हुन्थ्यो, न मित्रमण्डलीमा । कतै पनि उचित पात्र बन्न सक्तैन । यो सत्य भनूँ वा कठोर यथार्थ, उसले भोग्दै थियो । एउटा जगेडा वस्तु वा पात्रजस्तो भएको थियो । ऊ परविारकै मात्र होइन, राष्ट्रमै पनि जगेडाका रूपमा बाँच्तै थियो, जसका परििचत त धेरै थिए, तर आफ्नै जस्तो कोही थिएनन् ।
यता देशभित्र देश चलाउने ठेकेदारहरू भने ज्वलन्त बनेर देखापरेका थिए । बडो गर्व र दर्पमा राष्ट्रियता र राष्ट्रको बखान जादुमय यथार्थमा गर्दथे । ऊ छक्क होइन, थक्क पथ्र्यो । कारण ऊ कुनै पनि राजनीतिक पीठपोकेमा घुसि्रएको व्यक्ति थिएन । एक निरीह, निहत्था, निमुखा नागरकि थियो । यसैले बेरोजगार थियो । देशमा त्यसो त कामैकाम थियो तर उसका लागि कतै ठाउँ थिएन । आश्वासन थियो, कार्यान्वयन थिएन । बस्, ऊ थियो, उसका बेरोजगारी दिनहरू थिए । समय जसोतसो कट्तै थियो । कुनै निवृत्त बूढाको उमेर कटेजस्तै दिन कट्तै थियो ।
भोक लाग्यो । पेट छाम्यो । पानी खान एउटा होटलमा छिर्‍यो । भोक लागेर होइन, तिर्खा लागेर छिर्ने यात्रीसरह छिर्‍यो, किनभने भोक लागेर छिर्नेले रकम तिर्नुपथ्र्यो । तिर्खा लाग्नेलाई होइन । इनार, पम्प वा धाराको शुद्घ, अशुद्घ पानी पिउनलाई के पैसा ? अनि प्लास्टिकको जगबाट पानी कलकल पिउन थाल्यो ।
पानी पिएपछि आफ्नो मुख पुछ्यो । यसो चारैतिर दृष्टि घुमायो । दृष्टिहेराइ एक्कासि त्यहाँ गएर टक्क अड्यो, जहाँ एउटा मान्छे उसलाई हेरेर मुस्कुराउँदै थियो । कतै यसले थाहा त पाएन ।
ऊ बस्यो । त्यस मान्छेले चुरोट सल्कायो र साहुनीतिर हेरेर खाजा र चिया दुई ठाउँमा मगायो । ऊ मौन भएरै बस्यो ।
-अनि भाइ, अचेल के गर्दै छौ ?
-केही छैन दाइ ।
त्यसले सुस्केरा चुरोटको धुवाँसँगै फाल्यो । यो मान्छे को हो ? ऊ सोच्तै थियो । चिनिएको आफ्नो शब्दकोशको कुनै पनि पातोमा उपस्थित हुने नाम, सर्वनाम वा विशेषणयुक्त पात्र यो परेन ।
-अनि भाइ, कता छौ त ?
-म बेपत्ता छु दाइ ।
उसले दिन लागेको उत्तर थियो, सङ्घीय गणतान्त्रिक अवधारणाअनुरूप यसो हुन लागेको हुँ तर दिएन, किनभने खाजा टेबुलमा आइपुगेको थियो र त्यस मान्छेले खाजा सार्दै खान भन्यो र आफू पनि खान थाल्यो । खाजा खाँदासम्मको अवधि तिनीहरूबीच मौनताको रेखा कोरियो ।
खाजा धमाधम खाइयो । खाँदाखाँदै उसलाई लाग्यो, कतै यसले मलाई मूर्ख बनाएर खाजाको प्रकरण गरी फसाउने त होइन ? उसले खाजाको अन्तिम भाग खाएर त्यो मान्छेको अनुहार पुलुक्क हेर्‍यो । अनुहारमा त्यसो त कुनै कपट र धुत्र्याइँ थिएन । केही मत्थर सान्त्वना उसले प्राप्त गर्‍यो । त्यो मान्छे अन्ततः को हो ? यो भने अझै थाहा भएन ।
-बुझ्यौ भाइ, म पनि यस लोकतन्त्रको युद्घमा गोली खाने मान्छे हुँ नि ।
-हो र दाइ ?
-हो त नि । इ, हेर त मेरो कुममा...गोलीले छोएर गएको । यहाँ
यस्तो खत नभएकाहरू भटाभट खत पार्दै हुन्डी र मन्डी राज्यबाट प्राप्त गर्दै छन् । म भने राष्ट्रलाई ठग्न र छल्न सकिनँ । म क्रान्तिका लागि गोली खाने मान्छे हुँ, भ्रान्तिका लागि लड्ने व्यक्ति होइन । यस मुलुकका लागि दिन्छु रगत म । नठान्नू मलाई यो सबै फगत । क्रान्तिको पातपातमा युद्घको शुद्घ लक्ष्य हुनुपर्छ । रगतले राष्ट्रमाताको आँसु धुनुपर्छ...।
त्यस मान्छेको मुहारमा कुनै विक्षिप्तता देखिँदैन । कुरामा पनि त्यस्तो कुनै नकारात्मक टोन थिएन तर यो खाजा, यो कुरा...मान्छेको कस्तोकस्तो स्वभाव हुन्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन तर भेट भने हुन सकिन्छ, जस्तो आज भयो । उसलाई आजको दिन सप्रेजस्तो लाग्यो, किनभने आज भोकै घर र्फकन परेन । त्यो मान्छे केके कुरा गर्दै थियो, जति पनि कुरा गथ्र्यो, पूर्णतः सन्तुलन अवस्थाकै थियो । कुनै विग्रहको कुरा थिएन । भए पनि के र ? आजको उसको व्यर्थको दिन त एउटा प्राप्तिमा नै बित्यो ।
त्यस मान्छेले इतिहास, दर्शन, साहित्य, धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, राष्ट्रियता आदिको व्याख्यान यस्तरी दियो, त्यो सुनेर उसको भोको पेट खाजाले भरिए झैं “ दिमाख पनि टनाटन भएर टनटन गर्न लाग्यो । ऊ रन्थनियो । अब खाजाको पैसा कसले तिर्ने ? रात परेपछि ऊ घर फर्कियो र र्फकंदा पेट र दिमाख दुवै टनाटन भरएिको थियो । उसको एक पैसा पनि खर्च भएन तर भोको हुनुभन्दा बेकारी हुनुको ग्लानि भने अझै उसभित्र जिउँदोजाग्दै थियो ।
Posted by डिआर निश्छल at 11:56 PM
डिआर निश्छलको कृति उपन्यास "आकाश रोयो" सर्बत्र बजारमा उपलब्ध छ ।
प्रतिकृया गर्नोस् है त!
साहित्यसागर ब्लग भ्रमण गर्नु हुने सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जक तथा साहित्यानुरागी महानुभाबहरु,
छोटो समयमा नै तपाईंहरुले हाम्रो अभियानलाई सार्थक बनाउन गर्नु भएको मद्दत्,सहभागिता र बिश्वासले हाम्रो उत्साहमा थप उर्जा प्रदान गरेको छ । उच्च कोटीको कार्य जहिले पनि बिशिष्ठ स्थान मै रहन्छ ।यो यात्रालाई निश्चित गन्तब्य सम्म पुर्याउने श्रेयको सच्चा हकदार तपाईं सर्जक,पाठक भन्दा अरु कोही हुनै सक्दैन ।
साहित्यको यो अथाह सागरमा सिर्जनाका असङ्ख्य मोती फूलाउने तपाईं सर्जकहरुको मन र यसका इमान्दार पारखीहरुको पवित्र आँखा यी दुबै हाम्रो प्रयासको प्रतिरुप हो, जसले नेपाली भाषा साहित्यको श्रीबृद्दीमा एउटा प्रयास सफलीभूत हुनेछ भन्ने ठम्याइ रहेको छ हाम्रो ।
ब्लगलाई अझ बढी परिस्कृत , स्तरीय र तपाईंहरुको लागि नयाँ-नयाँ साहित्यिक खुराक पस्कने अभिप्रायले अब देखि (जनवरी २००९) हरेक महिना नेपाली साहित्य साधनाको क्षेत्रमा कृयाशील एक जना श्रस्टा (जसको यो ब्लगमा रचना प्रकाशित हुन्छन्) को साहित्यिक सेरोफेरोलाई "स्रस्टासँग अन्तरङ कुराकानी" मार्फत प्रस्तुत गर्दै लैजाने जमर्को गरेका छौ ।आशा छ-तपाईंहरुले हामीलाई उचित सरसल्लाह्,सुझाब र प्रतिकृया दिनुहुनेछ । जसको लागि ईमेल ठेगाना छ -
बीरेन्द्र राईको उपन्यास कृति "भाग्यले जुरायो" सर्बत्र बजारमा उपलब्ध छ ।
खोटाङ सेवा समाज,मलेसियाको प्रथम साहित्यिक प्रस्तुती 'आगमन' बजारमा सर्बत्र !
मलेसियामा रहने नेपाली प्रबासी साहित्यकारहरुद्वारा रचनाबद्द गरिएको सांगितिक कोशेली "सङगम"
नेपालीमा ताइप गर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्
केही उपयोगी वेभसाइटहरु
आदरणिय पाठकबृन्द्, नेपाली भाषा र साहित्यको श्रीबृद्दीमा केही थप् सघाउ मिलोस् भन्ने हेतुले यो ब्लग सन्चालन गरिएको हो। अत:सम्पूर्ण स्वदेश तथा प्रबासमा छरिएर रहनु भएका साहित्यप्रेमी मनहरुमा आफ्नो साहित्यिक लेख रचना, अमुल्य सल्लाह र सुझाबहरु तलको इ-मेल ठेगानामा पठाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । साथै एक प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो पनि पठाइदिनु होला।